Nke a bụ ihe anyị mere iji megharịa Okporo ụzọ Organic Atọ | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 30, 2014 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Afọ gara aga abụwo otu ebe anyị na-arụ ọrụ ike na ndị ahịa much nke mere na anyị na-elegharakarị ogige anyị anya. Martech Zone bụ akwụkwọ dị ịrịba ama nwere puku puku blọgụ ole karịrị afọ iri. Anyị akwagala Bochum, gbanwee isiokwu ọtụtụ oge, gbanwee ngwa mgbakwunye anyị oge niile, ma nwee ọmarịcha ogo oge na ndị dara ogbenye na ndị ọzọ.
N'ikwu eziokwu, anaghị m elebara anya na ịchọ n'ihi na anyị nwere ọkwa dị mma yana ndị na-ege ntị na-ege ntị nke email, ngwa mkpanaka, pọdkastị na vidiyo. Mana anyị na-arụ ọrụ na saịtị ahụ na-enweghị ike ọnwa ole na ole gara aga iji kwadebe maka mgbanwe mgbanwe na-abịanụ, anyị enweghị ike ịchọpụta na mgbanwe ndị anyị na-eme enweela nnukwu mmetụta na ogo saịtị ahụ gafere ọtụtụ puku mkpokọta isiokwu - ọtụtụ na-asọmpi.
Anyị ejighị nlezianya bulie saịtị ahụ ma nyochaa ọkwa, yabụ enweghị m ike ịgwa gị ihe njikọta ma ọ bụ otu ihe nwere mmetụta dị ukwuu. Enwere m ike ịgwa gị na mgbe ị mechara ihe ndị a niile, ogo anyị arịala elu. Ekwenyesiri m ike na ụfọdụ n'ime ha emeghị ihe dị iche, mana enweghị m ike ikwu ya na ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ. Ya mere - Aga m ekekọrịta mgbanwe na usoro nke m kwenyere na ọ kachasị nwee isi.
Njikọ Disavow - inwe backlinks na-adịghị mma apụtaghị na ị de-index, ọ nwere ike igbochi gị. Anyị mere nyocha backlink Njikọ Detox ma kwupụta njikọ niile dị na saịtị ndị gosipụtara ọfụma ma nwee ọtụtụ ụzọ esi apụ apụ.
Akwụkwọ asambodo - saịtị anyị dị nchebe ugbu a inwe arụnyere ihe SSL akwụkwọ ma na-arụ ọrụ site na ọtụtụ puku post nke tinyeworo ọdịnaya site na isi mmalite.
Ofu oyiri Aha - anyị nwere nnukwu nsogbu na isiokwu anyị dị ugbu a na okike oyiri abụọ na pagination ọjọọ na saịtị ahụ niile. Pagination ahụ nyere otu aha na nsonaazụ ọ bụla. Amaara m banyere okwu a ruo ọtụtụ ọnwa mana enweghị m gburugburu iji dozie ya n'ihi na ọ naghị emetụta ndị na-agụ akwụkwọ anyị (ọ bụghị ọtụtụ mmadụ pịa njikọ pagination).
Mkpakọ eserese - anyị gbasaa ihe image mkpakọ ngwọta na saịtị ahụ. Site na infographics niile anyị na-ekerịta, ụfọdụ nha faịlụ anyị buru oke ibu ma na-eme ka ibe ndị ahụ buru nwayọ nwayọ.
Wepu Peeji Ntughari - anyị na-agbaso usoro njikọ ọpụpụ ọ bụla na saịtị ahụ na ọtụtụ ihe nchọgharị. Ewepụpụrụ m àgwà niile na-ewepu mgbasa ozi anyị.
Belata ederede na arịrịọ CSS - nke a dị anya, mana anyị nwere plugins - gụnyere isi menu anyị - nke nwere ọtụtụ ederede na arịrịọ CSS. Anyị ka nwere ton na m na-achọ itinye, ma ugbu a, anyị nwere ihe dị ka ọkara nke arịrịọ mgbe ị na-eburu ibe.
Wepu Afọ Ochie - anyi nwere otutu edemede na teknụzụ na-adịkwaghị. Anyị ebelatala ọnụọgụ anyị na saịtị anyị site na ihe karịrị posts 1,000 karịa afọ gara aga. Ọ bụghị mgbe niile ka ihe ka mma - ọkachasị mgbe ị nwere ọtụtụ ọdịnaya na anaghị adọta uche. A na-ewepụ posts ndị na-enweghị mmekọrịta mmekọrịta, enweghị backlinks ma ọ bụ posts banyere teknụzụ na-adịkwaghị.
Kedu ihe anyị na-eme n'akụkụ iji nyere aka?
Ihe dị mma banyere ọrụ a dị n'elu bụ-na mpụga ịjụ na ịchekwa saịtị ahụ - ọrụ kachasị sie ike bụ imeziwanye ahụmịhe onye na-agụ ya na saịtị ahụ. Ọzọ anyị ga-alaghachi ma hụ na ọkwa ọ bụla nwere ezigbo onyonyo gosipụtara ya yana anyị na-ekerịta ihe ochie ochie ndị ka bara uru - na-anwa ịlebara ha anya iji wusie ikike nke ọdịnaya anyị na-etinye ike!
Ọ bụ ezie na m nwere obi ike na ihe a niile na-arụ ọrụ, enwere ike ịdị anya na saịtị ndị ọzọ anyị na-asọ mpi na-emenye na mmelite algorithm, kwa!
Nov 3, 2014 na 9:05 AM
Nke a bụ nnukwu ndepụta iji nweta ụfọdụ ngwa ngwa maka ego gị - zuru ezu nke a. Maka ndị mmadụ na-ebido, m ga - agbakwunye: gwunye n'ime Google Webmaster Ngwaọrụ gị ma ọ bụrụ na ịnweghị ọnwa ole na ole gara aga.
Nov 10, 2014 na 8:20 PM
Daalụ maka post Doug. You nwere ike ikwu karịa gbasara njikọ ndị na-esoghị? Anyị emeela omume nke ịme ka ọtụtụ njikọ ndị dị na mpụga ghara iso, yana, ma ọ bụ belata ọnụ ọgụgụ kwa post iji nyere aka gosipụta ihe blọọgụ ahụ bụ n'ezie, mana dabere na ihe ị kwuru n'elu, anyị kwesịrị ịgbanwe omume anyị?
Nov 11, 2014 na 8:46 AM
Matt Cutts emeela ka m nwekwuo nghọta na ntinye na vidiyo a nke dugara m ịgbanwe nke m. M na-ekwenyere na agbasoro njikọ dị ka "oghere" na saịtị m ebe m na-awụsa ikike laghachi na isi mmalite. Echiche nke onwe m ugbu a bụ na Google maara ma saịtị saịtị aga dị mkpa ma kwesị otuto. Y’oburu na ichoputa ihe obula n’echebeghi ya, amam doro anya na Google maara ma igha a egwu egwu sistemu. Ọzọkwa, echere m na mgbasa ozi kwesịrị ịnwe ha oge niile site na ndụmọdụ Google. Ihe ọ bụla ọzọ, enweghị m obi ike ọzọ. Nwere olileanya na-enyere aka! Nwere ike nwalee ma hụ! Wepu ha ma chere izu ole na ole iji hụ ihe merenụ!